Waxay abuurayeen afar daqiiqo “NYE Customized Countdown” in audio form. Then, a few years later into the highly acclaimed 4K, graphic-intense video countdown which has changed New Year’s Eve events all over the world.
Tirinta rasmiga ah ee NYE waxay abuureysaa wax la yaab leh “party-all-night” energy goobaha. Qalabka Dj ee ku haya qoob-ka-cayaaraha, ku hawlan, iyo cabitaanka dariiqa uur-qaadida habeenkii si loo xoojiyo ugana faa'iidaysto faa'iidada baraha!
Dooro nooca dib loo soo celiyo. Keen calaamaddaada, qaybta codka gaarka ah ee aad rabto, foomka faylka, iyo fursadaha kale ee la heli karo.